Xaqiijinta sharafta dadka dhintay iyo qoysaskooda intii lagu jiray Covid-19 | ICRC da Soomaaliya
Xaqiijinta sharafta dadka dhintay iyo qoysaskooda intii lagu jiray Covid-19
04/08/2020 , Maqaallo
Sara u kaca dhimashada fayraska COVID-19 waxay culeys saa’id ah saareysaa nidaamka caafimaadka markey timaado maarayta maydka. Khatartaani waxaa lagu yarayn karaa diyaar garoow wanaagsan iyo qorshe ku filan si sharafta qofka dhintay iyo tan qoyskaba loo dhowro.
Tani waxaa ka mid ah in si sax ah loo aqoonsado loona diiwaangaliyo kuwa dhintay iyo in la raaco qawaaniinta badbaadada. Intaa waxaa dheer, shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha aasku waxay qabanayaan shaqooyin muhiim ah dagaalka ka dhanka ah COVID-19. Waxay ka shaqeeyaan jawi walaac badan, waana inay awoodaan inay howshooda si nabad ah ku fuliyaan.
Toddobaadkii ugu dambeeyay ee Luulyo 2020, Guddiga Caalamiga ah ee Laan qeyrta Cas (ICRC) waxay bixiyeen ku dhawaad ​​1,000 boorsooyinka maydka iyo ilaa 5,000 qeybo oo ah qalabka ilaalinta shaqsiyadeed (PPE), oo ay ka mid yihiin galoofyada, muraayadaha indhaha, muraayadaha, iyo maaskaro, mas’uuliyiinta caafimaadka ee Soomaaliya si looga caawiyo maaraynta dadka dhintay hab nabadgalyo iyo sharaf leh.
Guddiga caalamiga ee laan qeyrta cas (ICRC) waxay leedahay khibrad balaaran oo ku aadan taageerida maareynta dadka dhintay inta lagu guda jiro cudurada faafa, oo ay kujirto talo bixin farsamo iyo taageero maamulada caafimaadka. Si loo joojiyo fiditaanka COVID-19, Guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas (ICRC) waxay gaarsiineysaa bulshooyinka fariimo muhiim oo kahortag ah oo ku saabsan sida dadku naftooda uga badbaadin karaan fayraska.